Kudzivirira kwemvura: isina maseru maseru mamiriro, hapana kunwa kwemvura, kusagadzikana kwehunyoro, yakanaka kuramba mvura.
Ngura nemishonga: husingagumi nemakemikari ngura senge mvura yegungwa, girizi, asidhi, alkali, nezvimwewo .. isina kunhuwa, uye kusvibiswa-isina.
Shock kuramba: kukwirira kusimba uye kusagadzikana kuramba, kuomarara kusimba, uye kwakanaka kuvhunduka kuramba uye cushioning zvivakwa.
Thermal kuputira: yakanakisa kupisa kupisa, kutonhodza-kuchengetedza uye kudzika-tembiricha kuita, uye inogona kushandiswa mukutonhora kwakanyanya uye kuputira.
Kuputira kwezwi: isina mhepo sero, yakanaka kurira yekumisikidza mhedzisiro, zvinobudirira kudzikamisa vhoriyamu muma decibel.
Processability: nyore kutema, kutsika, kupisa kudzvanya, kutswanya, kugadzira, kunamatira, kusunga, rabha pad uye kumwe kugadzirisa.
Senge mota, maacircon emhepo, mafiriji, mafiriza, midziyo yemumba, firiji yeinjiniya uye firiji uye kutonhora, nezvimwe. lining zvinhu zvematehwe, shangu dzemitambo, mitambo insoles, mukwende kumashure mapads, surfboards, kupfugama mapedhi, furo tepi zvigadzirwa; Ice chengetedzo, inotonhora-proof zvivakwa, mwenje matenga, kuvaka zvivakwa uye zvimwe zvivakwa zvinopisa zvinoputira zvinhu; zvigaro zvemotokari, zvemukati zvemotokari, matenga emota, pads etsoka, sun visor zvinhu; midziyo yemagetsi, chaiyo michina, zviridzwa uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi Mhando dzakasiyana dzeminda senge yekuvhundutsa-humbowo uye kuputira kurongedza. Zvemotokari zvikamu zvemagetsi, mweya-kutonhodza uye firiji accessories, inotonhorera yekuchengetedza zvinhu, michina uye michina yekuisa chisviniro zvikamu, kupisa zvikamu, kuputira linings ezviridzwa zvakasiyana siyana, zvekushandisa zvekurapa, zvekuyera maturusi, zvinhu zvemitambo, zvivakwa zvehungwaru, nezvimwe.
Pashure: Yoga bonde rechikadzi rechirume kurovedza muviri rakareba rakawedzeredzwa rakakora risiri-rekutamba dhanzi kusimba kurovedza muviri mat matangi mat mat pamba
Zvadaro: ew chigadzirwa mucheche mucheche achikambaira mukobvu wakapfava EVA furo yevana isiri-yekutsvedza kutamba bonde kurongedza imba yekurara kumba vana havagone kukambaira pasi
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Floor Mat Puzzle, Floor Furo Rakajeka Mat, Yepasi Yekunze Exercise Mat, Floor Rakajeka, Floor Puzzle Mat Cushion, Floor Furo Rakajeka, Zvese Zvigadzirwa